कामना बैंकको नाफा १२१ प्रतिशतले बढेको छ भने सेवा बैंकको नाफा कति ? - Janakpur News
Home / अर्थ / बाणिज्य / कामना बैंकको नाफा १२१ प्रतिशतले बढेको छ भने सेवा बैंकको नाफा कति ?
कामना बैंकको नाफा १२१ प्रतिशतले बढेको छ भने सेवा बैंकको नाफा कति ?
Newsjanakpur May 9, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका Leaveacomment 79 Views
काठमाडौ, वैशाख २६ । सेवा विकास बैंक लिमिटेड (Sewa Bikas Bank Limited) ले तेस्रो त्रैमासमा मुनाफा ७८ दशमलव ०८ प्रतिशतले वृद्धि गरी १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा बैंकले ७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको थियो ।
९४ करोड १८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको सेवा विकास बैंकले जगेडाकोषमा २३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा २१ दशमलव ९९ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५ अर्ब ३४ करोड २८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जसबाट बैंकले कर्जामा ४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानीमा ७३ दशमलव ०२ प्रतिशतले बढेर २६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै संचालन मुनाफा ७९ दशमलव ८२ बैंकले १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखेको छ ।
बैंक (SEWA) को निष्कृय कर्जा शुन्य दशमलव ९४ प्रतिशत, पुँजीकोषको अनुपात २० दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक १८ दशमलव ४९ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात २१ दशमलव ०९ गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १२५ दशमलव ०३ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २९ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ ।
Previous articleचितवन र सल्यानमा उमेद्वारको मृत्यु
Next articleमिसन डेभलपमेण्ट बैंकको नाफामा ७५ प्रतिशतले वृद्धि
Previous मिसन डेभलपमेण्ट बैंकको नाफामा ७५ प्रतिशतले वृद्धि
Next चितवन र सल्यानमा उमेद्वारको मृत्यु